IMacBook Pro enee-mini-ze-LED, iMicrosoft yeMouse Pro kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Kule veki sonke siyayazi into I-WWDC kulo nyaka kwaye ingaphezulu nje kweeyure ezingama-48 ukuze iqale ngentetho ephambili. Kodwa ngelixa usuku olulindelwe zizigidi zabasebenzisi beApple lufika luzobona izibonelelo zenkqubo entsha yokusebenza kufuneka siphile ubomi obuqhelekileyo kwaye kule meko kufuneka sishwankathele enye iveki ezinye zeendaba ezibalaseleyo kule veki ndiku ukusuka kwi-Mac.
Siqala ngeendaba ezibhekisa kwi IMacBook Pro ngomboniso we-mini-LED. Umthengisi we-Apple iGlobal Lighting Technologies iza kuqala ukuthunyelwa kwezinto ezivela Ukuboniswa kwe-mini-LED yemodeli entsha yeMacBook Pro kwikota yesithathu ka-2021.
Enye yeendaba eziqaqanjisiweyo kule veki yile Ingqiqo ye-Apple yemouse ebizwa ngokuba nguMlingo Pro. Le ngcamango ayiyinyani kodwa inika isisombululo kuzo zonke iziphene esizifumana kwi-Apple Magic Mouse, Siza kubona ukuba iApple ithatha naziphi na iinkcukacha zeli Mouse elizayo.
La Inguqulelo entsha ye-beta 2 ye-MacOS Big Sur 11.5 kubaphuhlisi ngoku iyafumaneka. Kule meko kwaye njengakwiinguqulelo ze-beta zangaphambili, inkampani isungula le nguqulo iphuculweyo yabaphuhlisi apho ijolise ekulungiseni nasekusombululeni iingxaki.
Ukugqiba sabelana nawe ngeendaba ze Iimodeli ezintsha zeMacBook Pro ziyavuza. Ugcino lwedatha eTshayina beluphethe ngokungaqondanga ngokuveza ngokungekho semthethweni ezi zixhobo zintsha zeApple. Kuya kufuneka silinde ukuba yinyani kwaye ngakumbi mzuzu wokumiselwa ngokusemthethweni uninzi luthetha ngeWWDC elandelayo, siza kuyibona kungekudala ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMacBook Pro enee-mini-ze-LED, iMicrosoft yeMouse Pro kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Yintoni onokuyilindela kwi-WWDC ukuqala ngomso, umhla we-7